Jamal Khashoggi: Xogta xasaasiga ah ee la helay sannad ka dib - BBC News Somali
Jamal Khashoggi: Xogta xasaasiga ah ee la helay sannad ka dib
2 Oktoobar 2019
Kooxaha u ololeeya Xuquuqda Aadanaha waxay dalbanayaan in cadaallad ay helaan qoyska weriyihii caanka ahaa ee Sacuudiga u dhashay Jamal Khashoggi, sannad ka dib markii lagu dilay Turkiga.
Maamulka Sacuudiga weli ma aysan muujin "isla xisaabtan macno leh", ayey qortay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay hay'adaha Xuquuuqda Aadanaha.
Hay'adahan waxay Boqortooyada ka dalbanayaan in la sii daayo dad kale oo dowladda dhalleeceyn jiray oo weli xabsiyo ku xiran.
Jamal Khashoggi, oo ka tirsanaa wargeyska Washington Post, waxaa lagu dhex dilay, maydkiisana lagu jarjaray, Qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taalla Istanbul, 2-dii bishii October, ee sannadkii la soo dhaafay.
Waxaa la sheegay in 15 xubnood oo u shaqeynayay dowladda Sacuudiga ay Turkiga u tageen fulinta howshaas. Illaa iyo haddana maydkiisa lama helin.
Sida ay qortay AFP, 11 qof oo arrintaas lagu eedeeyay ayaa maxkamad lagu soo taagay Riyadh, kuwaas oo shan ka mid ah lagu xukumay dil, balse dhageysiga dacwadda waxay ka dhacday meel qarsoon, lamana shaacin magacyada eedeysanayaasha.
"Maamulka Sacuudiga wuxuu xannibay isla xisaabtan wax ku ool ah oo la xiriira dilkii Khashoggi," ayey tiri hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch.
Hay'adda waxay cambaareysay hadalkii dhowaan ka soo yeeray dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan oo sheegay in uu aqbalay in masuuliyad wadareed ay ahayd dilkii Khashoggi, balse wuxuu beeniyay in isaga si shaqsi ah loogu eedeeyo arrinta.
"Haddii ay dhab ka tahay, amiirka iyo dowladdiisa waxay soo bandhigi lahaayeen maxkamadeyn daahfuran, waxayna shaacin lahaayeen waxkasta oo ay ka og yihiin qorsheynta, dilka iyo ka dib wixii dhacay markii la dilay Jamal Khashoggi," Waxaa sidaa sheegay Agaasimaha HRW ee Bariga Dhexe, Sarah Leah Whitson.
Xog xasaasi ah oo ku saabsan 'dilkii Jamaal Khaashuqji' oo lasoo bandhigay
Khaashuqji ayaa maqaallo u diyaarin jiray wargeyska Washington Post waxaana uu saldhiggiisu ahaa dalka Mareykanka, ka hor inta aan la waayin.
Erdogan oo dowladda Sucuudiga ku eedeeyay dilkii weriye Jamaal Khaashuqji
Khaahsuqji oo Salaadda Janaasada looga dukaday labada Xaram
Image caption Dibadbaxyo ka dhacay duleedka safaaradda Sacuudiga ee Mareykanka, lix maalmood ka dib markii la waayay, sawirkan wuxuu ka mid ahaa kuwii ay siteen dadkii isu soo baxay
Mas'uuliyiinta Sacuudiga ayaa ugu dambeyn dilkii Jamaal ku qeexay howlgal "aan cidna looga amar qaadanin" waxayna dacwad kusoo oogeen 11 nin.
Muxuu yiri Wargeysku?
Image caption Wargeyska ayaa sheegay in Jamaal uu dadkii dilayay u sheegay inaysan afkiisa xirirn
Wargeyska Sabah wuxuu horay ciwaanno badan oo caalami ah uga sameeyay macluumaadka ku saabsan dilka wariyaha - waxaana ka mid ahaa warar muran abuuray - oo la xiriira dhimasada Jamaal Khaashuqji.
Isbuucan wuxuu daabacay labo warbixin oo lagu faahfaahinayo dhimashada Khaashuqji oo ay ka dambeeyeen koox uu ku tilmaamay "kuwa dilalka fuliya".
Qormada waxaa lagu xusay xog ku saabsan inuu nin khabiir ku ah dilalka qorsheysan, oo ka mid ahaa kooxda laga soo diray Sacuudiga, kaasoo wariyaha ku tilmaamay inuu yahay "xayawaan loo dilayo danta guud".
Image caption Ku dhawaad 1 sano ayaa kasoo wareegtay dhimashada Jamaal Khaashuqji
Image caption Wali lama helin meydka Jamaal
Agnes Callamard ayaa eerida Jamaal Khaashuqji ku qeexday "Dil aan geed loogu gabbanin" waxayna sheegtay in "ay mas'uul ka tahay dowladda Sacuudi Carabiya", loona baahan yahay in baaritaanno lagu sameeyo.
Dowladda Sacuudiga ayaa gaashaanka u daruurtay hadalka haweeneydaas, waxayna si joogto ah u beenisaa inay mas'uul ka tahay dhimashada wariyaha.